အသုံးပြုသူ:Galahad - ဝစ်ရှင်နရီ
This page is available in english and spanish. You see the english version, because in Special:Preferences you selected "my" (မြန်မာဘာသာ, Burmese) as user-interface language. To achieve this effect, use on your global userpage this example.
ဤစာမျက်နှာကို ဝီကီမီဒီယာ ပရောဂျက်တစ်ခုခုမှ မဟုတ်သည့် အခြားဆိုဒ်မှ သင်တွေ့ရှိခဲ့ပါက၊ သင်သည် ပုံပွားဆိုဒ်အား ကြည့်ရှုနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စာမျက်နှာသည် ဟောင်းနွမ်းနေနိုင်သည့်အပြင် ဤစာမျက်နှာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အသုံးပြုသူသည် ဝီကီမီဒီယာ ပရောဂျက်(များ)မှ လွဲ၍ အခြားမည်သည့်ဆိုဒ်နှင့်မျှ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ နှီးနွယ်ပတ်သက်ခြင်း မရှိသည်ကို သတိပြုပါ။ မူရင်းစာမျက်နှာသည် https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Galahad တွင် တည်ရှိပါသည်။
ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင် သင်မြင်ရသောအရာမှာ https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Galahad မှ မိတ္တူကူးထားသည်
"https://my.wiktionary.org/wiki/အသုံးပြုသူ:Galahad" မှ ရယူရန်